Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Madaxwaynaha Cusub ee Hirshabeelle | Entertainment and News Site
Home » News » Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Madaxwaynaha Cusub ee Hirshabeelle
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Madaxwaynaha Cusub ee Hirshabeelle
daajis.com:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha Cusub ee Dowlad Gobolleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Awaare oo shalay xilkan loo doortay, kaddib doorasho ka dhacday magaalada Jowhar.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu bogaadiyay hannaankii ay u qabsoontay doorashadii Hirshabelle, isagoo ku tilmaamay mid ka tarjumaysa bisaylka siyaasadeed ee ka hana qaaday guud ahaan dalka.
Madaxweynaha ayaa kula dar daarmay dhammaan bulshada Hirshabelle in ay ka wada shaqeeyaan taaba galinta iyo hanaqaadka Maamulkooda, si lo xaqiijiyo horumarka iyo nabadgalyada deegaanka.
“Waxaan Alle uga baryayaa, hoggaanka cusub ee Hirshabelle, in uu u fududeeyo howlaha adag ee horyaalla, oo ay ka mid tahay dardargalinta dib-u-heshiisiinta, xaqiijinta amniga iyo dhamaystirka dhismaha maamulka”ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambeyn Madaxweyne Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in Dowladda Faderaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay dhamaystirka nidaamka faderaal, si loo xaqiijiyo dib u soo kabashada dalka.